Shiinaha Graphite Paper / bireed graphite / sheet graphite debecsan saaraha iyo qeybiye | Jinglong
Warqad Graphite / bireed graphite / Xaashida graphite rogrogmi kara
Warqadda Graphite waa nooc ka mid ah alaabada garaafka ee ka samaysan kaarboon sare iyo fosfooras flake graphite iyada oo loo marayo daaweynta kiimikada iyo wareejinta ballaarinta heerkulka sare. Waa sheyga aasaasiga ah ee soosaarka shaabaddo garaafyo kala duwan. Waraaqda garaafka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'sheet graphite', oo leh astaamaha u adkaysiga heerkulka sare, caabbinta daxalka, iyo habdhaqanka korantada oo wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa batroolka, kiimikada, korantada, sunta, ololi karta, qalabka heerkulka sare ama qaybo, waxaa laga dhigi karaa a noocyo kala duwan oo garaaf ah, xirxirida, goomaatada, saxanka isku dhafan, suufka silsiladda, iwm.
Warqadda Graphite waa nooc ka mid ah alaabada garaafka ee ka samaysan kaarboon sare iyo fosfooras flake graphite iyada oo loo marayo daaweynta kiimikada iyo wareejinta ballaarinta heerkulka sare.
Waa sheyga aasaasiga ah ee soosaarka shaabaddo garaafyo kala duwan. Waraaqda garaafka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'sheet graphite', oo leh astaamaha u adkaysiga heerkulka sare, caabbinta daxalka, iyo habdhaqanka korantada oo wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa batroolka, kiimikada, korantada, sunta, ololi karta, qalabka heerkulka sare ama qaybo, waxaa laga dhigi karaa a noocyo kala duwan oo garaaf ah, xirxirida, goomaatada, saxanka isku dhafan, suufka silsiladda, iwm.
Iyadoo la dardargelinayo kor u qaadista alaabada elektarooniga ah iyo baahida sii kordheysa ee maareynta kuleylka ah ee qalabka elektarooniga ah ee mini, heer sare oo isku dhafan iyo waxqabad sare leh, tikniyoolajiyad cusub oo heer kul ah oo loogu talagalay alaabada elektaroonigga ah ayaa la soo saaray, kuwaas oo ah, xalka cusub ee xalka kuleylka maaddada garaafka. Xalkan cusub ee garaafka dabiiciga ah wuxuu adeegsadaa waraaqda garaafka oo leh waxtarka kuleylka sare, meel yar, culeys fudeyd, kuleylka kuleylka labada dhinacba, wuxuu baabi'inayaa aagagga "kulul", wuxuuna hagaajinayaa waxqabadka elektarooniga macaamiisha iyadoo laga ilaalinayo ilaha kuleylka qaybaha. Codsiyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah kombuyuutarrada gacanta lagu qaato, kormeerayaasha flat-panel, kamaradaha fiidiyowga ee dijitaalka ah, taleefannada gacanta iyo aaladaha kaaliyaha shaqsiyeed.
Dhaqdhaqaaqa kuleylka wanaagsan: kuleylka kuleylka illaa 600-1200 w / (mk) (oo u dhiganta 2 ilaa 4 jeer oo naxaas ah iyo 3 ilaa 6 jeer oo aluminium ah), caabbinta kuleylka ayaa 40% ka hooseeya aluminium iyo 20% ka hooseeya naxaasta
Culeyska culeyska gaarka ah: 1.0-1.9g / cm3 (cufnaanta waxay u dhigantaa kaliya 1/10 ilaa 1/4 oo naxaas ah, 1 / 1.3 ilaa 1/3 aluminium)
Caabbinta kuleylka oo hooseeya, jilicsan oo sahlan in la gooyo (soo noqnoqonaya)
Ultra-khafiif ah: dhumucdiisuna (0.025-0.1mm)
Dusha sare waxaa lagu dari karaa bir, caag, dhejis iyo waxyaabo kale si loo daboolo howlaha naqshadeynta iyo baahiyaha kala duwan
Hore: PG Grid / Pyrolytic graphite shaxda / shabakadda tuubada elektaroonigga ah (vacuum Semi-finish)
Xiga: Xirxirida xirmooyinka garaafka